တောင်ရေးမြောက်ရေး စာစုများ: ဂေါပက Rules
Posted by Moe Tain Nyo at 7:59 PM
Nanda July 2, 2011 at 7:04 PM
သဘောကျတယ်။ အမြင်ထပ်တူကျတယ်။ ဂေါပက သာသနာ ထွန်းကားလိုက်တာ ဗုဓ္ဒဘာသာလဲ လိင်ခွဲခြားတဲ့ ၀ါဒ (မဟာပုရိသ ၀ါဒ)၊ လူတန်းစားခွဲခြားတဲ့ဝါဒ၊ လူတွေကို ဘုရားကျွန်ဆိုပြီး ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် forced labor လုပ်ခဲ့တဲ့ဝါဒ၊ ကိုယ့်ဘ၀ရပ်တည်ရှင်သန်ဖို့ အလုပ်လုပ်တာဟာ လောဘတွေ၊ဒေါသတွေဖြစ်လို့ မကောင်းဘူးလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ဝါဒ၊ တဖက်ကကျတော့ လူဖြစ်လျှင် လူမင်းစည်းစိမ်၊ နတ်ဖြစ်လျှင် နတ်မင်းစည်းစိမ်ကို ကမ်းကုန်အောင် ခံစားစံစားပြီး ငြီးငွေ့သွားတော့မှ ဘာမှန်းတိတိကျကျ သေချာနားမလည်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ၀တ်ကြေတန်းကြေ သွားချင်ကြတဲ့ ၀ါဒ၊ ရုပ်နမ်တို့ရဲ့ မတည်မြဲခြင်း ဖြစ်ပျက်သဘောကို ဥာဏ်ပေါက်အောင် မရှုတတ်တော့ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကို ဘာဖြစ်ဖြစ် အကုန် ဒုက္ခချည်းပဲ ဆိုပြီး ရမ်းသမ်း ရှုတဲ့ pessimism (အဆိုးမြင်ဝါဒ) .. ၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုခြင်း အမှုကို ဈေးတွက်တွက်ပြီး နောင်အမြတ်ပေါ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလိုက်တဲ့ ၀ါဒ၊ ပြုလိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ဟာ လူ့ဘောင် တကယ်အကျိုးပွားဖို့ ကို ဦးစားမပေးပဲ နောင်ဘ၀ကို ငွေလွှဲဖို့လောက် သဘောထားတဲ့ ၀ါဒ.. စသည်ဖြင့် ဘာမှန်းမသိ အူကြောင်းကြားဝါဒကြီးလို ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာနေပြီ။
Nanda July 2, 2011 at 7:08 PM
(၁ခါရေးတင်ပြီး မပေါ်လို့ ဒုတိယတခါထပ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ထပ်သွားရင် တခုပြန်ဖျက်လိုက်ပါ)
Nanda July 2, 2011 at 7:54 PM
Ko Moe Tain Nyo, I postedacommentacouple of times and it doesn't appear. Something wrong with the comment system. Could you please check?
Moe Tain Nyo July 3, 2011 at 9:27 AM
Hi Ko Nanda, thanks for the feedback. I will check now.
Moe Tain Nyo July 3, 2011 at 9:32 AM
Ko Nanda, ကိုနန္ဒရဲ့ ကွန့်မန့်တွေက ဘာလို့လဲ မသိဘူး Spam Inbox ထဲဝင်သွားတယ်ဗျ။ အခု Not Span လုပ်လိုက်ပြီ။